musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Belgian Nhabvu Vatambi Radja Nainggolan Childhood Story Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius inonyatsozivikanwa neNickname; "Ninja". Our Radja Nainggolan Childhood Story plus Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wese anoziva kuti mumwe wevane nhengo dzakanakisisa uye dzakakwana muEurope asi vashomanana vanoona Radga Nainggolan's Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Radja Nainggolan Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Radja Nainggolan akaberekwa musi we 4th May 1988 muAntwerp, Belgium. Akaberekwa naamai vake vakakurumidza, Lizi Bogaerts Nainggolan uye baba, Marius Nainggolan. Vakamutumidza kuti Radja izvo zvinoreva "Mambo". Radga akaberekwa mapatya. Akakurira nevana vake vatatu-hanzvadzi nehanzvadzi mbiri, anonzi Riana Nainggolan. Pasi pane mufananidzo wavo wehuduku.
MuBelgium, akakwidziridzwa muFlemish chizvarwa asi akaomerera kuIndonesia yakatanga. Nemidzi, iye muIndonesian weBatak background uye nechitendero, nhengo yeBatak Christian Protestant Church.
Radja akanga achiri kukwidziridzwa muRoma Katurike uye akataura Dutch, Chirungu neItaly zvakanaka, uyewo kunzwisisa French. Semukomana muduku, Radja akaona ukama huri pakati pevabereki vake. Baba vake vakashinga kuenda kunze kwemhuri, vakabuda kubva kuBelgium ndokudzoka kuIndonesia. Radja, vanun'una vake naamai vake vaifanira kurarama pachavo, vasina mari yakawanda. Chero mwana chero upi zvake akararama kuburikidza nekuparara kwevabereki achaziva zvakanaka chete kurwadziwa kwepfungwa kunogona kukonzera. Izvi zvaiva nemigumisiro yakaipa yepfungwa kuna Radja. Zvinokonzerwa zvakajeka zvaiva nemigumisiro mukukura kwake kwaakatsungirira munguva yehuduku hwake.
Radja uye hanzvadzi yake, Riana akagamuchira kukurudzirwa kubva kuna amai vake kutamba bhora vachitarisa kuti chero kana kuti zvose zviri zviviri zvinogona kubudirira. Kunyanya zvakadaro, kuziva ruzivo rwavo uye kwavakabva, Lizi Nainggolan vakaona bhora sechirongwa chekuti vana vavo vabve muurombo.
Radja Nainggolan Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Career in Summary
Chido chaRadja chebhora chakatanga paaiva nemashanu. Pamwe nehanzvadzi yake, akatanga kutamba muTubantia Borgehout, kambani duku kubva kumusha kwake. Pazera re10, akatamira kuGermany Beerschot, boka riri muBelgian top flight. Ndiyo apo paakaziva kuti bhora raive zvechokwadi ramangwana rake uye nemajaya ake akanaka. Kuti ave nemakachengetedze uye asinganyadzisi mai vake, Radja haana kumborega kudzidza. Vose pamwe naye nehanzvadzi yake, Riana akanga ari pamusoro pekirasi yavo.
Radja akasara paGermany Beerschot kusvika 2005, apo akaonekwa naAlessandro Beltrami uyo akamubatsira kuenda kuSecaline Serie B kechikwata chePacenza kuti apedzisire achinyatsogumira pahuduku hwake. Mushure mehupenyu hwake hwevechidiki, akakwidziridzwa kumutambo wavo mukuru. Mune 2010, akatamira kuCagliari kwaakamboita kwemakore matatu sekusarudzwa kwekutanga.
Maitiro ake ne Rossoblu akaita kuti ave akakurumbira zvikuru pakati pevatsva vavo, avo vakamutumidza mumutambo mukuru we11 unosanganisira vatambi vakanakisisa munhoroondo yekambani yeSardinian. Izvi zvakakonzera Roma kuti aende kunoshanda kwake mu2014. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Radja Nainggolan Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Bhoti zvirokwazvo zvirokwazvo muti wegoridhe kuna Radja. Nzvimbo yaakawana mumvuri uye nyaradzo kubva pane zvaainge achinetseka. Zvichida, mumwe muti wegoridhe wakaunza mumvuri uye kunyaradza kunosangana nomudzimai wake anodiwa, Claudia.
Claudia Nainggolan Lai akafananidzirwa pasi apa mudzimai waRadja Nainggolan. Iye ari nyore, pasi pano uye mudzimai akanaka chaizvo uyo ari nostalgic nokuda kwehupenyu hwezuva nezuva.
Anotsanangura kuti akasangana sei naRadga achiti ..."Ndakasangana naRadja muCagliari uye chaive rudo pakutanga pakutanga. Pandakadzidza mushure memwedzi miviri kuti akanga ari mutambi wenhabvu, ndaida kusiya. Ndinoziva hupenyu hwomubati wehomwe ari mubasa, uye zvakadaro, vane vakawanda vanoyemura. Panguva iyoyo, ndakanga ndichishanda mune nguva yakazara yekutengesa mall, zvishoma ini ndichiri kukanganwa. Sezvo muscular sezvaaitarisa, ndakaona kunyara sezvaakandiudza kuti aindida, zvinoshamisa zvakare pakutanga. Paakandiudza kuti akanga achienda kuRoma handina kutora zvakanaka. Ari kuRoma, munhu wese anotarisa zvakanaka akapfeka, kusiyana neCagliari. Zvakanditora nguva ndisati ndachinja. Mushure megore, ndakatanga kubuda ndiine sneakers. Ndichiri kukanganisa kuva noupenyu hwangu hwekutanga, kwandakanga ndava norusununguko rwakawanda rwekuita zvimwe zvinhu. "
Vose Claudia naRadja Nainggolan vakasarudza kusunga pfumo mu2011. Pasi pane mufananidzo wemuchato wavo wakaitika pamusana unoshamisa weCinecittà World, paki yekunakidza yeCastel Romano, Italy.
Muchato wavo wakakomborerwa pakarepo nemichero yechibereko. Aysha Nainggolan mwanasikana wavo akaberekwa musi we 30th musi waJanuary 2012.
Claudia anoda kutevera rudo rwake, Radja Nainggolan, mumutambo wekugadzirira kutsva pamwe chete nemwana wavo anotarisa zvishoma zvishoma mumufananidzo uri pasi apa.
Vakaroorana vakaona kuora kwekuroorana kunyange panguva yekubuda uye vakadarika kupfuura. Munguva pfupi, vakaroorana vakapinda mumakakatani akawanda akataurwa mumasangano ehupfumi.
Mapurisa eItaly akatomhan'ana mhosva naRadja Nainggolan nekushungurudza, kutyisidzira uye kurwisana nemudzimai wake. Claudia. Nenzira yakanaka, vakashandura kusiyana kwavo.
Radja Nainggolan Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Kutanga kubva, Radja ane ropa raBatak kubva kuna baba vake, Marianus Nainggolan vanobva kuIndonesia. Zvakakosha kutaura kuti Radja Nainggloan inobva kune imwe mhuri yakashata yose kuburikidza nababa vake, Marius vakasiya nyika yavo, Indonhiya vane tarisiro yekuita kuti iwedzere muBelgium kuti vawane hupenyu huchiri nyore kwaari kuti apfuure muBelgium.
Izvi zvakakonzera Marianus Nainggolan kudzokera kuIndonesia kuti ienderere mberi nebhizimisi rake. Nhasi basa rake rakaoma rakabhadhara., Apo mwana wake nemwanasikana wake vakange vaita hurukuro yebhola, Marianus pachake akava mumiririri wezvokutengeserana muchitsuwa che Bali.
PaPacenza zvakare Radja Akabatanazve nababa vake Kusiyana nevamwe vanomhanya Deli Ali.
Nguva yacho yakaitika pakupedzisira 2007 after anotsvaga 13 makore. "Tichazosangana zvakare. Papa anobva kuBali kuenda kuItaly kuzoona ini naRiana " akadaro Radja uyo asina kumbobvira atora zvivi zvababa vake mumwoyo make.
Amai: Amai vaRadja ndivo vaBelgium kubva. Asati aroora, iye ainzi pakutanga, Lizi Bogaerts. Lizi akaroora Marius uye akamushandura anonzi Nainggolan. Nhamo, Lizi akafa mu 2010, zvinotakura makore matatu mushure mekunge murume wake adzoka kubva pakusiyiwa. Mushure mokufa kwake, Radja akazora mapapiro makuru maviri kumusana wake nemaruva ake ekuberekwa uye rufu. Sezvinoonekwa pasi apa. Zvechokwadi, Radja ane musana wake wakazvipira zvakakwana kuna amai vake.
Hanzvadzi sikana: Riana Nainggolan ndiye mutsara mukuru kune twine hama yake, Radja. Akazvarwa zuva rakakura kudarika mukoma wake muAntwerp, musi waMay 3, 1988.
Sezvambotaurwa kare, zuva rekuzvarwa kwake munin'ina wake 4th yaMay, 1988. Hanzvadzi yaRadja, Riana Nainggolan, sehanzvadzi yake zvakare inotamba seA AS Roma vakadzi vechikwata chechikwata sepanguva yekunyora. Anopawo nyaya yake yekusiyiwa nababa vake avo vakambosiyira kwete iye chete asi mhuri yake mumamiriro ezvinhu akaoma semwana.
Asati asvika kuRoma, Riana Nainggolan vakanga vachiri kushingaira kuchitamba mumakwikwi ebhora revakadzi reBelgium, Kontich. Akatungamirira boka rake kuti rive rakakurumbira nhangemutange yenyika muBelgium.
Hanzvadzi konama: Manuel Noboa akafananidzirwa pasi apa ihafu yehama Radja Nainggolan. Chinhu chokutanga kuziva pamusoro pake ndechekuti Naboa iCentral Fan.
Radja hafu-mukoma Manuel Noboa akamboudza vhidhiyo; "Ndakaita kuti rive rakanyarara uye rakajeka kakawanda kuti hama yangu Radja, inofanira kuenda kuCentral. The Premier League ndiyo nzvimbo yakanaka yehutano hwake. Zvinosuruvarisa, anoda Roma zvikuru. "
Radja Nainggolan, weBelgium ane Indonesian midzi, ndeye, pasina mubvunzo, murume ane mafashoni. Sekusvika paRomania mu2014, nhamba dzake dzebhora dzakawedzera gore negore. Haasi kungosimuka pamusana pemutambo wake mumunda asi nekuda kwekutarisa kwake kunoshamisa uye nemitambo isina kuwandisa pamuviri wake wose izvo chaizvoizvo zvinouya nemarwadzo anorwadza.
Radja Nainggolan Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Tattoo Collection
Mune hurukuro dzakawanda, akazivisa kuti matanho ake ose ane zvarinoreva uye ivo vanokosha kwaari, kunyanya avo vakazvitsaurira kuna amai vake vakaguma.
Kunze kwekutarisa maziso ake, kana tikaita pamusoro-pasi pasi reRaja Nainggolan, tinowana paradhiso izere nematoto, mamwe ave akafukidzwa nezvitsva, seya pamutsipa wake unoverenga; "Kutanga" (Kutanga). Uyewo, zuva rakanyorwa nendima VaRoma vaakashanda naye mutsara wekutanga paPiacenza rakatsiviwa nemoyo wemapapiro unoisa mutsipa weBelgium. Ona pasi apa;
Zvinyanya kuonekwa kumativi epamberi emuviri isimba rakanyora pamutsipa wake. Uyu ndiwo dhi rakakura rakanaka.
Kune nyoka yakareba iyo inopinda nepakati penzira yake uye pakati payo ine chinyorwa muChirungu: "Urarame usingafungi. Rudo pasina kuvimba. Teerera pasina kudzivirira. Taura usina kukanganisa ". Pamusoro penyoka ine mutsara unotevera: "Hupenyu humwe, chimwe chido" (Imwe hupenyu, chimwe chido).
Nainggolan ane tende rakasvibirira muruoko rwake rworuboshwe uye Buddha inoratidzwa pasi apa. Pamusoro pete tende maruva ejasi. Iine zita romwanasikana wake wokutanga "ALISA" pamusoro pepamberi yebato rweruboshwe uye nyeredzi dzakawanda. Muchikamu chimwe chete, ane zita raamai vake mumutauro weElvish.
Pedyo nechingwe, Radja ane zvimwe dice, rimwe chete nhamba 5 (Zvinoreva MAY, mwedzi wake wokuberekwa) uye imwe, nhamba 4, (Zvinoreva, akazvarwa musi we 4th waMay). Iye anewo zvinyorwa zvinoreva ... "Rudo kukunda" (Ndinoda kukunda) kuruboshwe rwake. Kuruoko rwake rworudyi, pane imwe inotaura ..."Henga kurasikirwa" (Ndinovenga kurasikirwa).
Radja ane tattoo shoma pamakumbo ake. Ari muhudyu yakarurama, akatora maikorofoni ane kapu uye yekutanga RN4. Zvinyanya kuonekwa mumufananidzo uri pasi apa pane dhiyabhorosi anotyisa kuruboshwe rwake.
Mumhuru, ane zita rezita rokuti 'ninja' rine nhamba 4. Muchikamu chake mune zita rehanzvadzi yake muine chiChinese uye mumakumbo, chiratidzo chedhora uye "Las Vegas".
Muchiuno chekuruboshwe kune bhokisi duku (lateral) uye riri mberi, bakatwa rine ziso rimwe.
Radja Nainggolan Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Upenyu hwehupenyu
Radja Nainggolan ane chirevo chinotevera kumunhu hwake.
Strengths: Iye akavimbika, ane mwoyo murefu, anoshanda, akachengetedza pasinei nekuonekwa kwake kunoshamisa.
Kushaya simba: Anogona kunge akaoma musoro, ane pfuma uye asingatauriki.
Chii chakada Radja: Zvidhori, zvine vhudzi zvakasiyana-siyana zvinotarisa, kurima, mimhanzi, rudo, zvipfeko zvakakwirira uye kushanda nemaoko.
Zvichida Radja: Kungoerekana kuchinja, ukama hwehukama, kusachengeteka kwemarudzi ose uye michina yekugadzira.
Muchidimbu, Radja inoshanda uye yakagadzirirwa. Ndiye mumwe munhu anoda kukohwa zvibereko zvebasa rake. Anonzwa kudikanwa kwekukomberedzwa nerudo uye runako uye anofunga kubata uye kunonwisa zvakakosha zvezvinhu zvose. Nainggolan akagadzirira kutsungirira nekunamatira pane zvisarudzo zvake kusvika asvika pamucheto wekugutsikana kwake.
Radja Nainggolan Childhood Story Plus Untold Biography Facts -kusvuta
Akataura zvakare nezvekusvuta fodya pakati pemashoko iye achangobva kudonhedzwa nemudzidzisi weBelgium Roberto Martinez nekuda kwetsika yake.
'Handinyari nokuti ndinoputa uye handina kumbovanza tsika iyi,' Nainggolan akaudza vatori venhau kunze kwebambani yekudzidzira Belgium. "Ndinoziva kuti ndinofanira kuisa muenzaniso wakanaka, ndine vana ... Asi ini ndiri muchecheti, ndinoita basa rangu. Munhu wose anoziva kuti ndinoputa uye handigone kuzvivanza, asi handinyari.
CHOKWADI KUTI: Tinoonga nekuverenga Radja Nainggolan Childhood Indaba pamwe neS Untold Biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.
Daniele De Rossi Utano Hwokupedzisira Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Chivabvu 26, 2019